Waxa habeenkii xalayto ahayd Magaalada Hargeysa Lagaga dooday Barnaamij Siyaasadeedka Xisbiga Kulmiye Kaga qayb galayo Doorashada fooda inagu Soo haysa qaybtiisa Waxbarashada.
Friday September 29, 2017 - 14:02:24 in Wararka by xasme axmed ismaciil
Waxa habeenkii xalayto ahayd Magaalada Hargeysa Lagaga dooday Barnaamij Siyaasadeedka Xisbiga Kulmiye Kaga qayb galayo Doorashada fooda inagu Soo haysa qaybtiisa Waxbarashada. Hargeysa(Hargeisa-News)Waxa habeenkii xalayto ahayd Magaalada Hargeysa Lagaga dooday Barnaamij Siyaasadeedka Xisbiga Kulmiye Kaga qayb galayo Doorashada fooda inagu Soo haysa qaybtiisa Waxbarashada.
Barkulanka Taagerayaasha Xisbiga Kulmiye oo ah xarun lagu falanqeeyo qaybaha uu Ka Koobanyahay Barnaamijka Xisbiga Kulmiye ayaa lagu falanqeeyey qaybta Waxbarashada ee barnaamijka Xisbiga KULMIYE.
Aqoonyahan Maxamed Cali Bile ayaa xarunta Barkulanka Taageerayaasha XisbigaKulmiye kusoo bandhigay qodobada Xisbiga KULMIYE ka qabandoono Waxbarashada iyo waxyaabaha uga qorshaysan tayeynta Waxbarashada dalka guud ahaan.
Sidoo kale Waxaa Munaasibada kasoo qayb galay Wasiirka Wasaarada Cadaaada Axmed Faarax Cadare, Agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarashada Iyo Tacliinta Sare Axmed Abokor, Gudoomiyaha Garabka Dhalinyarada heer Qaran ee Xisbiga Kulmiye Cabdi Najax Siyaad Aw Cabdi iyo Xubno Ka mida AqoonyahanKa Iyo maamulayasha Dugsiyad Dalka Iyo Qaar Ka Mida Walidiinta ardaydoodu wax Ka bartaan dugsiyada iyo Jaamacadaha dalka .
Munaasibadan ayaa intii ay socotay waxa lagu Falanqeeyey heerkii Waxbarasho maraysay ee Somaliland soo martay iyo horumarka la gaadhay intii Xukuumada Xisbiga KULMIYE talada dalka haysay. Waxaana la lafaguray heerka Waxbarashada ee Somaliland taagan tahay Maanta iyo baahiyaha ugu culus ee wax laga qabanayo muddo xileedka Labaad ee Xisbiga KULMIYE.